Home Wararka Ciidamadii Saciid Deni duldhigay Boosaaso oo cabsi ku abuuray shacabka
Ciidanka loo yaqaan PMPF ayaa xalay cabsi aan jirin ka abuuray magaalada Boosaaso sida ay xaqiijiyeen goob-joogayaal kala duwan. Cutubyo ka tirsan PMPF oo ku hubaysan gaadiidka dagaalka ayaa xalay dhufayso ka samaystay qaar kamid ah xaafadaha Rayidku deggan yihiin halkaas oo ay haddana saaka ka baxeen.
Tallaabada ciidankaas qaaday ayaa loo arkay mid mas’uuliyad-darro ah islamarkaana dhibaato u keentay amniga iyo xasiloonida Boosaaso. Ciidamada kale ee dowladdu ku daabushay Boosaaso ayaan wax dhaqdhaqaaqa samayn halka Ciidanka PSF-na ay xarumahooda joogaan.
Previous article(Deg Deg) Midowga Murashaxiinta oo eedeeyay Rooble, gebi ahaana qaadacay Doorashada BFS
Next articleSomaliland oo beenisay inay qayb ka noqonayso dagaalka Tigreey
Wasiirad Qadiijo ayaa diiday goaan kasoo baxay gudiga ka hortaga caabuqa...
(Faallo) Xildhibaan gunta haka goynin geedkan aad hadhsanayso